अविस्मरणिय ऐतिहासिक पात्र बिसे नगर्ची – Gorkhali Voice
अविस्मरणिय ऐतिहासिक पात्र बिसे नगर्ची
२०७७, १६ जेष्ठ शुक्रबार ०८:३६
राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा बिसे नगर्चीको योगदानका बारे हामीसंग पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाणहरू छैनन्। यद्यपि नेपालको एकीकरण इतिहास आफैंले प्रमाणित गर्छकि, बिसे राष्ट्रिय एकीकरण अभियानको सार्वजनिक अग्रणी व्यक्तित्व थिए। मणिराम गाइने, बांगे सार्की जस्ता अनेक व्यक्तित्वहरुले राष्ट्रिय एकीकरण प्रक्रियामा “गोरखाको नागरिक” को रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
इतिहासका पुस्तकहरू पढ्ने क्रममा यो महसुस गर्न सकिन्छ कि धेरै जसो नेपाली इतिहासकारहरूले उनीहरूको लेखनिमा यस्ता महत्वपुर्ण पात्रहरुले गरेको योगदानलाई वेवास्ता गरेका थिए। इतिहास लेखनको अभ्यास राजा, महाराज, सिपाही, योद्धा तथा उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुमा सिमित रहने र आम सर्वसाधरण त्यसमा पनि तत्कालिन समयमा जातिय स्तरिकरणमा तल परेका शुद्र समुदायका व्यक्तिहरुको योगदान र भूमिकालाई गौण मान्ने गरिएका कारण तिनिहरुको योगदान इतिहासले भन्दा पनि इतिहासकार द्वारा क्ष्यति पुर्‍याईयो।
अब यो प्रमाणित भयो कि, बिसे त्यतिबेलाको गोर्खा राज्यको नागरिक हुनुहुन्थ्यो। वहाँ दर्जी (दमई) समुदायका हुनुहुन्थ्यो जसलाई शुद्र वर्ण तथा तथाकथित तल्लो जातको भनि समय र सन्दर्भ बमोजिम होच्याउने तथा सामाजिक मुलप्रवाहिकरणमा नजरअन्दाज गरिन्थ्यो। यो विश्वास गरिन्छ कि उहाँ तत्कालीन महाराजका राजा (बाडामहाराज) पृथ्वीनारायण शाहका समकालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । नेपालका अग्रणी संगीत इतिहासकार स्वर्गीय रामशरण दर्नाल र इतिहासकार डा. राजाराम पौड्यालका अनुसार बिसेको जन्म गोरखा जिल्लाको पोखरीथोकमा वि.स. 1970 तिर भएको थियो। अनुसन्धानकर्ता लोक प्रसाद शर्माले २०५४ वि.स. मा प्रकासन भएको आफ्नो रिपोर्टमा बिसे नगर्चीको बुबाको नाम धन्य (धन वा धने) भएको बताउनुभएको छ। बिसेको नाममा पनि केही साना दुविधा छन्। कोहीले अनुमान गरे कि बिसे भन्ने शब्द बिश्व, बिश्वेश्वर वा बिश्वास आदि शव्दबाट आएको हो। वहाँ नौबागको उपनामका दार्जी\_दमाई समुदायको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । नौबाग शब्द संगीतकार समुदाय र नागर्चीसँग पनि सम्बन्धित छ। वास्तवमा, नगर्ची\_कुनै जात वा थर थिएन र हैन। नगर्ची एक अधिग्रहण उपाधी थियो जुन गोर्खा राज दरबारले बिसेको परिवारलाई दिएको थियो। परिवार गोर्खा शाही दरबारमा या त पारिवारिक दर्जी वा संगीतकारहरूको रूपमा सम्बन्धित थियो।
कोहीले अनुमान गरे कि बिसे भन्ने शब्द बिश्व, बिश्वेश्वर वा बिश्वास आदि शव्दबाट आएको हो। वहाँ नौबागको उपनामका दार्जी\_दमाई समुदायको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । नौबाग शब्द संगीतकार समुदाय र नागर्चीसँग पनि सम्बन्धित छ। वास्तवमा, नगर्ची\_कुनै जात वा थर थिएन र हैन। नगर्ची एक अधिग्रहण उपाधी थियो जुन गोर्खा राज दरबारले बिसेको परिवारलाई दिएको थियो।
सबैभन्दा महान इतिहासकार र सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय योगी नरहरि नाथले बिसे नगरार्चीलाई आफ्नो इतिहास प्रकाशन सन्धिपत्र संग्रह भाग एक (A Collection of Historical Evidences Parts-I) मा केन्द्रित गरेका छन्। यद्यपि योगीको विवरणले बिसेको बारेमा पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन, जस्तै बिसेको थिए? वहाँका पुर्खाहरू कहाँका थिए? यद्यपि राष्ट्रिय एकीकरणको अभियानमा वहाँको अस्तित्व र विशेष योगदान रहेको तथ्य प्रमाणित गरेको छ।
यस्तै स्वर्गिय नाटककार भीम निधि तिवारीले पनि पञ्च ऐतिहासिक एकांकी(A Collection of Five Historical One Act-Plays)मा बिसे नगर्चीको नाम उल्लेख गर्नुभएको छ । तिवारीको ऐतिहासिक नाटकले पनि बिसे र उनको योगदानमा पर्याप्त जानकारी पुर्‍याउन सकेको छैन। नाटकले राष्ट्रिय एकीकरण प्रक्रियामा बाइसको योगदानमा केही झलकहरू समावेश गर्‍यो। उनका नाटकका अनुसार, २१ वर्षको उमेरमा राजा पृथ्वी नारायण शहले नेपालको एकीकरण प्रक्रिया शुरू गर्दा, विसे नगर्ची ४० बर्षका र राजा भन्दा धेरै जेठा हुनुहुन्थ्यो।
उपलब्ध प्रमाणहरूका अनुसार हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि बिसे नगर्चीले राजा पृथ्विनारायण शाह र उनको एकीकरण प्रक्रियालाई दुई फरक तरीकाले सहयोग गरे। सर्वप्रथम, जब ‘गोरखा राज्य’ ले सैन्य र युद्ध गतिविधिहरूको व्यवस्थापन गर्न वित्तीय समस्या सामना गर्नुपर्‍यो, बिसेले राजा पृथ्विनारायण शाहलाई एकीकरण खर्च पूरा गर्न गोर्खा राज्यको प्रत्येक घरबाट एक रुपैयाँ संकलन गर्न सल्लाह दिनुभयो। राजा पृथ्विनारायण शाह, बिसेको सल्लाहमा सहमत हुनुभयो र त्यसै अनुसार काम गर्नभयो। बिसेको सल्लाहले राजा पृथ्विनारायण शाहलाई एकीकरण केन्द्रित युद्धहरूका लागि हतियारहरू किन्नको लागि पर्याप्त पैसा जम्मा गर्न/संकलन गर्न मद्दत गर्‍यो। यसले स्पष्ट पार्दछ कि बिसे राजा पृथ्विनारायण शाहका एक गैर-भुक्तानी सल्लाहकार थियो। दोस्रो, बिसे एक गायकको रूपमा एकीकरणको युद्धमा भाग लिएका थिए। वहाँ युद्धको मैदानको अगाडि पूर्ण भावना, भक्ति र प्रतिबद्धता भएका युद्ध गीत गाउनुहुन्थ्यो। वहाँका गीतहरूले गोरखा सिपाहीहरूलाई सहसि, जुझारु र लगनसिल बन्न प्रेरित गरेका थिए।
राजा पृथ्विनारायण शाह, बिसेको सल्लाहमा सहमत हुनुभयो र त्यसै अनुसार काम गर्नभयो। बिसेको सल्लाहले राजा पृथ्विनारायण शाहलाई एकीकरण केन्द्रित युद्धहरूका लागि हतियारहरू किन्नको लागि पर्याप्त पैसा जम्मा गर्न/संकलन गर्न मद्दत गर्‍यो।
इतिहासकार डा. राजाराम पौड्यालले लालमोहर (राजाको आदेश) सुनाउँदै बिसेले गोरखा शाही दरबारहरूले सिंचित क्षेत्र (खेतियोग्य जमिन) प्रदान गरेको दाबी गरे। केही अन्य इतिहासकारले अनुमान गरे कि बिसेलाई राजा पृथ्विनारायण शाहको एक सार्वजनिक सल्लाहकारका रूपमा सम्मानित गरिएको थियो जसले एकीकरण पाठ्यक्रमको लागि पैसा संकलन गर्ने सल्लाह दिएका थिए । अन्य इतिहासकारहरूले राजा पृथ्विनारायण शाहको शासन अगाडि पनि बिसेको परिवारको गोरखा राज्यसँग सम्बन्ध थियो, त्यसकारण तत्कालीन राजा नरभूपाल शाह (राजा पृथ्विनारायण शाहका बुबा)ले सिन्चेको क्षेत्र उपलब्ध गराए। ती सबै र अन्य ऐतिहासिक कागजातहरू हेर्दा, यो स्पष्ट पार्छ कि बेसी नगर्ची राष्ट्रिय एकीकरणको प्रक्रियामा अग्रणी योगदानकर्ता थिए। त्यसकारण हामीले राष्ट्रिय निर्माण प्रक्रिया प्रति उनको योगदान र समर्पण अन्वेषण गर्नुपर्नेछ। इतिहास लेखकको नयाँ पुस्ताले नेपालको इतिहासको खाताको अघिल्लो कमजोरीलाई सच्याउन सक्छ र बिसे र जस्ता जस्ता धेरै व्यक्तिको भूमिका र योगदानलाई उजागर गर्न सक्षम हुनेछ।
(लेखक : नुमनाथ प्याकुरेल (बिनोद) समाजशास्त्र/मानवशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)